3D camo Ghillie Ezu - China 3D camo Ghillie Ezu Supplier,Factory -Fujie n'èzí
Home » ngwaahịa » ịchụ nta » GHILLIE ona
3D camo Ghillie Ezu
1. 3D camo uwe mejupụtara ise seperate akụkụ: ude, jaket, headgear, egbe Kechie, nchekwa bag.
2.3d camo ghillie uwe headgear nwere a agba eriri maka mfe adjustability
3.3d camo ghillie uwe jaket: Na-agbanwe n'úkwù na cuffs; mfe na snap n'ihu.
4. 3d camo ghillie uwe ude: Na-agbanwe waistband na drawstring ukpụhọde.
5. Drawstring ebu obere akpa gụnyere maka mfe iga.
6. Fabric cant enwe oké ụzụ mgbe na-akpụ akpụ .
7. Hand keosusu.
8.agba :ọhịa ma ọ bụ olive green ma ọ bụ desert ma ọ bụ snow na-acha ọcha.
A ozuzo uwe, makwaara dị ka ghillie uwe, e mere na-yiri arọ akwụkwọ. Snipers, dinta na eke foto nwere ike iyi a ozuzo uwe ngwakọta n'ime ha gburugburu na-ezo onwe ha site na ndị iro ma ọ bụ zaa. The suut enye wearer \_ 's guputa a atọ-dimensioned gbasaa, kama a linear otu.
The ozuzo uwe mejupụtara a jaket, a ụzọ uwe ogologo ọkpa na a ngwugwu bag.
Nke a ozuzo uwe bụ anyị 2014 New Design nke nwere na-eju afọ ozuzo mmetụta.
Mere nke elu àgwà polyester, ya \_ 's nnọọ inogide na fechaa. Ị nwere ike ibugharị nnọọ ngwa ngwa yi ya na-asa ya mfe na saa igwe. E nwere ihe abụọ camo agba maka gị oke. Anyị nwekwara ike ime ka ọ dị ka gị kpọmkwem chọrọ.
1.Ahịa bụ Chineke anyị,àgwà dị ndụ anyị.
2.Ọ bụla sample ga-eme ka gị nnyocha dị ka gị arịrịọ.
Hangzhou Fujie N'èzí Products Inc. specializes na emebe, n'ichepụta na erekwa a dịgasị iche iche nke n'èzí ngwaahịa. na 20 afọ nke ulo oru ahụmahụ,anyị nwere ike swiftly na kpomkwem ịghọta ahịa needs.We na-raara onwe ịbụ gị onye-akwụsị n'èzí solutiions eweta.
Anyị isi na ngwaahịa ndị na azu&ịchụ nta ngwaahịa gụnyere ozuzo suut,ozuzo ịchụ nta bags,ozuzo ịchụ nta na okpu,ozuzo ịchụ nta ụgbụ,Pu&Nnọọ insoles usoro,agha uwe usoro,Neoprene akpụkpọ ụkwụ&waders series,Rubber akpụkpọ ụkwụ&waders series,waders usoroọ ụkwụ&waders series,wading akpụkpọ ụkwụ usoro.